हुर्रामा मस्त सेलेब्रिटी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
हुर्रामा मस्त सेलेब्रिटी
मंसिर १३, २०७६ विप्लव भट्टराई
(इलाम) — मंसिरे चिसो बढ्दै गएको बेला इलाममा हुस्सु कुहिरोले आक्कलझुक्कल घुम्टो ओडाउँछ । बादलुको घुम्टो र पारिलो घामको लुकामारीबीच पाइने इलामको सौन्दर्य बिछट्टको हुन्छ । यही प्राकृतिक छटामा पुल्किँदै प्रदेश १ का पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धनमा आएको सेलेब्रिटी टोलीले इलामको रमणीयतासँगै यहाँको संस्कृतिसँग पनि खेलेरै रमाइलो साटे ।
माइखोला तीनपटक तर्दै सन्दकपुर–५ को ढापपोखरी पुग्नासाथ ठूलो संख्यामा उपस्थित स्थानीयको न्यानो स्वागतले चिसो बिर्सिएका उनीहरूले डुंगामा फन्को मार्नुसँगै लिम्बू जातिको परम्परागत ढोल नाचको स्वाद चाखे । टिममा सहभागी रकस्टार अभया सुब्बाका लागि ढोलनाच नौलो थिएन । तर मिस युनिभर्स नगमा श्रेष्ठ, मिस नेपाल युनिभर्स शुभेक्षा खड्का, मिस एसिया युनिभर्स पिंकी राजगढियालगायतलाई नौलो थियो त्यो दृश्य ।
निर्धारित सेडुलभन्दा झन्डै ३ घण्टा ढिलो मात्र ढापपोखरी प्रवेश गरेका उनीहरू समयको परवाह नगरी ढोलनाचमा मस्त रहे । आफैं ढोल भिरेर स्थानीयसँगै तालमा ताल मिलाउन पाएकोमा दंग देखिएका सेलेब्रिटीको प्रस्तुतिले उपस्थितलाई झन् हौस्यायो । अझ शुभेक्षाले मादलको तालमा ढोल बजाउँदै दिउँसो भट्याएको दृश्यले सबैलाई रोमाञ्चित बनाएको थियो ।
इम्याजिन नेपालको समन्वयमा ‘पहिले देश घुमौं अनि मात्र विदेश’ नाराका साथ पूर्व दौडाहामा रहेको टोलीलाई सन्दकपुरको डाँडा चुम्न निक्कै हतारो थियो । तर त्यस तल स्थानीयले लामो प्रयासमा थालेको पर्यटन अभ्यास, रहनसहन, कलासंस्कृति र मौलिकतासँगै देखाएको न्यानो आतिथ्यले लक्ष्य पुग्न ढिलाइ गरिरहेको थियो ।
स्करपियोलाई छोप्ने गरी बनाएको छालको आनन्दमा एउटै माईखोला तीन पटक पार गर्दाको रोमाञ्चकतासँगै सन्दकपुरतर्फ तन्कादा अर्को गन्तव्य थियो मावुको तीनकुने । करिब ४ बजेसम्म ब्रेकफास्टको भरमा थकित उनीहरू गुन्द्रुकको अचार, दही, किवी फल र स्थानीय अर्गानिक उत्पादनसँगैको सामीप्यतामा पुग्दा भने सबै चिन्ता हटेको महसुस गर्दै थिए ।
धुम्म परेको दिनले साँझतर्फको यात्रा छोट्याउँदै गर्दा सिंगो टोली तीनकुने छिटो छाड्न चाहन्थ्यो । तर लामो प्रतीक्षामा रहेर गाउँको उत्पादन चखाएर मात्र चित्त नबुझाएका स्थानीय अर्ग्यानिक संस्कृति पनि पस्कन चाहन्थे । यही मेसोमा सुरु हुर्रा नाचको रौनक । मगर जातिको परम्परागत पहिरनसहित हुर्रा नाचको रौनकताले फेरि उनीहरूलाई गाडीबाट उतार्‍यो ।
स्थानीय कलाकारसँगै उपस्थित सबै सेलिब्रेटीले तालमा ताल मिलाउँदा थप आधा घन्टा बितेको पत्तै भएन । ‘गोजीमा दाम छैन ...’ गीतमा कम्मर मर्काएकी प्रमिता राना पनि हुर्रा नाचसँगै प्रशंसकसँग सेल्फी खिच्न नै व्यस्त देखिन्थिन् । आगन्तुकले जति रमाइलो गरे उति आनन्दित बन्दै थिए स्थानीय । ‘यहाँको प्राकृतिक छटा र सांस्कृतिक विविधतालाई आगन्तुकले निको मानिदिए भने यहाँको पर्यटनले गति लिनेछ,’ पर्यटक र कलाकारलाई हौस्याउँदै रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राईले भने ।
साँझ अबेर सन्दकपुर पुगेको टोलीले बिहान झुल्के घामसँगै सगरमाथादेखि कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण अनि नेपाल, भारत र भुटानका ६० वटा जति हिमालको लस्कर देखेपछि फुरुङ्ग बन्यो भ्रमण टोली । अर्को दिन माइमझुवाको बाटो भएर माइपोखरी हुँदै अन्तु पुग्ने क्रममा देउराली बजारमा फेरि सुरु भयो शेर्पा जातिको परम्परागत नाच । उसैगरी थकान बिर्सेर सहभागीले स्थानीय कलाकारलाई साथ दिए ।
‘यात्रामा रहेका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट देशविदेशमा यो क्षेत्रको प्रचार गर्ने छन्,’ टोलीका संयोजक स्वरूप केसीले भने, ‘इम्याजिन नेपालले यसअघि पनि नेपालका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सघाएको छ ।’ पूर्वी पहाडको एड्भेन्चरमा निस्किएको करिब ५ दर्जनको टिममा बैंकर्स, ब्लगरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएकोहरूको सहभागिता थियो ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:३०
अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म महोत्सव : १३ देश, १५ फिल्म
काठमाडौँ — लोक संस्कृति र सम्पदालाई फिल्ममार्फत् कसरी सुरिक्षत बनाउन सकिन्छ ? प्रविधिको जमानामा मूर्त–अमूर्त संस्कृतिलाई नयाँ ढंगले कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? घनीभूत बहससहित बिहीबार राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म महोत्सव सुरु भएको छ । जमलस्थित दिवंगत संगीतकर्मीहरूको नाममा बत्ती बाल्दै राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय लोकसंगीत फिल्म महोत्सव सुरु भएको छ ।
जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा महोत्सवको नवौं संस्करणको पहिलो दिन लोकसंगीत र संस्कृतिका ११ वटा कार्यपत्र पेस गरिएका थिए । शंकर विष्ट, मधुसूदन गिरी, कुमार रञ्जित, चाँदनी मल्ल, खड्ग बूढाले मगर, कृष्ण गुरुङ विनोद गन्धर्व, इन्द्रमान महर्जनलगायतले विभिन्न नेपाली लोकबाजामाथि चर्चा गरेका हुन् । फिल्मको सेसन भने शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ ।
लोक संगीत, संस्कृति, परम्परा, मिथक र मान्यतामाथि बनेका फिल्म समेटेर हुँदै आएको महोत्सवमा यसपटक १३ मुलुकका फिल्महरू छानिएका छन् । नेपाली लोकबाजा संग्रहालयले गर्दै आएको महोत्सवमा यसपटक अमेरिका, भारत, नेपाल, चीन, स्लोभेनिया, जापान, नेदरल्यान्ड, बेलायत, क्यानडा, कम्बोडिया र चिलीको फिल्म छानिएका हुन् । फिल्मका माध्यमबाट अमूर्त सम्पदा प्रवर्द्धनको उद्देश्यसाथ हुँदै आएको महोत्सवले पछिल्लोपटक नेपालीभित्रै पनि ‘सम्पदा सचेतना’ फैलाउने सघाउँदै आएको आयोजक लोकबाजा संग्रहालयका अध्यक्ष रामप्रसाद कँडेलले जनाए । ‘आधुनिक विकास र ज्ञानका आज संसारभर सम्पदा संरक्षण ठूलो मुद्दा बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लोकको मौलिक पहिचानका रूपमा पुर्खाहरूको संस्कृतिलाई नयाँ ढंगले प्रचारप्रसार गरेर मूल्य स्थापना गर्न सकिएन भने भोलि यो नमिठो इतिहास बन्नेछ । त्यही भएर हामीले एक दशकअघि नै महोत्सव सुरु गरेका थियौं ।’
महोत्सव सुरुवातको समय अमूर्त संस्कृतिमाथि पनि फिल्म बन्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले आफूहरूलाई हौस्याएको पनि उनले जनाए । ‘अहिले यो महोत्सव मनोरञ्जनसँगै संसारभरका लोक संस्कृति, लोक नाच, लोकबाजादेखि लोक संगीतसम्मको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने थलो बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने । यसपटकको महोत्सव नारा भने ‘जीवनका लागि संगीत र बाँच्नका लागि संगीत’ तय गरिएको संग्रहालयका सचिव होमनाथ भण्डारीले जनाए ।
प्रतियोगी र अप्रतियोगी गरी १५ वटा डकुमेन्ट्री फिल्महरू देखाइने महोत्सवअन्तर्गत बिहीबार नाचघरमा लोक संगीत संरक्षणसम्बन्धी कार्यशालासमेत हुनेछ । शुक्रबार एड्रिय हेकम्यानको ‘बोन इन डोल्पो’, बिजु टोप्पो र मेघनाथको ‘गडी लोहादागा मेल’, कोरल तिङ्गेको ‘हार्ट बिट अफ नेपाल’, तेरादा यासिटाकाको ‘मारानाओ कल्चर एट होम एन्ड डायस्पोरा’ लगायतका फिल्म देखाइने भण्डारीले जनाए । फिल्महरू वरिष्ठ फिल्मकर्मी प्रदीपकुमार उपाध्याय, प्रकाशजंग कार्की र शंकरसिंह विष्टको निर्णायकमण्डलले छनोट गरेको हो ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७६ ०९:२७